Ghana Vision 2020: Mara Etu Na Sayensị | Igbo kasahorow
ụbọchị ụka. Ọnwa Iri na Abụọ 5, 2021
Anokwale by GhanaThink, Tuzde. Ọnwa Iri na Abụọ 31, 2019 - ụbọchị ụka. Ọnwa Iri 31, 2021. 𓀠 132
Mara etu na sayensị na-toro obodo.
Ghana na-nwere mara etu na sayensị obere ụfọdụ.
Ghana na-mkpa mara etu na sayensị.
Ubi, okike na ike na-mkpa mara etu na sayensị ọzọ.
Ghana na-mkpa ụlọ akwụkwọ ọ bụla n'ime mara etu na sayensị.
#sayensị #na #mara etu #toro #obodo #Ghana #nwere #ụfọdụ #obere #mkpa #ubi #ike #okike #ọzọ #n'ime #ọ bụla #ụlọ akwụkwọ
Ndekọ Ndu: Arthur Kuuku Emmanuel Lennox